Fanomanana fifidianana : Efa mirona amin’izany ny ankolafy rehetra | Ny Valosoa Vaovao
Fanomanana fifidianana : Efa mirona amin’izany ny ankolafy rehetra
Ny hetsika rehetra ataon’ny politisiana gasy amin’izao herintaona sy enim-bolana mialohan’ ny fifidianana ny taona 2018 izao dia efa mizotra any amin’ny fanomanana izany sahady. Tsy ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ihany fa eo koa ny an’ny solombavambahoaka. Ny mpitondra amin’izao Repoblika IV izao no miezaka mandresy lahatra ny vahoaka amin’ny fanaovana litania fa manao ezaka hampivoarana ho amin’ny tsaratsara kokoa ny fianam-pirenena amin’ny ankapobeny. Ny tsapa aloha hatramin’izao dia miantehitra amin’ny vola angatahina na samborina any ivelany ny mpitondra amin’ny fanatanterahina izany. Tsy misy vokatra azo tsapain-tànana anefa satria ny mpamatsy vola tsy matoky izao fitondrana izao noho ny fitantanana tsy mahomby sy tsy mangarahara eo amin’ny fampiasana ny vola. Etsy an-kilany koa miantso ireo mpandraharaha avy any ivelany hampiasa ny volany eto Madagasikara kanefa manahy ny ho very vola ireo satria tsy azo antoka ny fandriampahalena. Marina fa hiteraka asa ho an’ny tanora malagasy ny fiavian’ireny mpandraharaha ireny kanefa laharampamehana ny fampiroboroboana ny indostria eto an-toerana aloha satria ny tombony ho azon’ny mpampiasa vola avy any ivelany dia haveriny any amin’ny firenena niaviany fa tsy hajanony eto velively. Ny fitondrana koa ho fitsinjovana sahady ny mety ho fandreseny amin’izany fifidianana izany dia miantehitra amin’ireo rafitra najorony izay manana andraikitra mivantana na an-kolaka mifandraika amin’izany. Raha ny fijery azy ety ivelany sy ny fihetsiky ny Ceni tato ho ato anefa dia toa mitaky ny tena fahaleovantenany ka tsy manaiky ny tsindry ataon’ny mpanatanteraka aminy intsony.
Ny mampanahy ny olompirenena anefa dia sao atao izany mody mba hampandriana adrisa manoloana ny fanakianana maro momba ny fanomanana sahady ny hala-bato. Efa nisy fitakiana ihany koa momba ny tokony hifidianana mivantana ny filohan’ny faritany sy ny faritra ary ny fokontany kanefa niniana tsy notanterahina izany satria azo antoka kokoa ny olom-boatendry noho ny trosa ara-moraly (dette morale) amin’ny mpanendry. Ny zava-doza ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana izao koa dia ny fiezahany hanolo Hvm ny ben’ny tanàna voafidim-bahoaka sasantsasany any ambany ravinkazo any ho fitsinjovany ny fifidianana ihany. Tsy vitan’izany fa misy koa ny fandatsahana ny ain’ny ben’ny tanàna tsy Hvm any amin’ny kaomininy hafa. Raha tena mitombina tokoa ny fandraisana andraikitry ny Ceni araka ny voalaza etsy ambony dia tokony hanaradia azy koa ny Hcc ka hijoro amin’ny fahamarinana ka hitsara ny toe-draharaha araka ny lalàmpanorenana tokoa. Efa manakaiky ny fanapahan-kevitr’ity andrim-panjakana ity tokoa mantsy ny momba ny fanendrena ny filohan’ny mpanohitra ao amin’ny Antenimieram-pirenena. Efa fanomanana ny sain’ny vahoaka hifidy azy koa no ataon’ny mpitondra amin’izao fotoana amin’ny alàlan’ny fitokanana fotodrafitrasa sy ny fanampiana tampi-maso sy vonjitavanandro. Mirona amin’izany fanomanana ny fifidianana ihany koa ny hetsiky ny mpitarika antoko politika na ny mpanohitra na ny mpanohana ny fitondrana. Tsy takona hafenina ny fahasahiranam-bahoaka amin’izao fotoana izao ka manararaotra izany ny mpanohitra izay miezaka manambatra ny heriny amin’ny fananganana vondrona kanefa tsy mety mifanara-kevitra sy miray hina noho ny fitiavana hitarika. Tsy vitsy ihany koa ireo namadika ny tolona niraisana ka lasa miaradia amin’ny mpitondra indray. Tsy azo hadino ireo midradradradra tsy mahandry izany fifidianana izany intsony satria mijaly ny vahoaka kanefa politisiana efa teo amin’ny fitondrana ihany izy ireny kanefa tsy nahomby ka tsy ilaina hiverina eo intsony. Tsapan’ny olompirenena izany toetsaina izany ka aty am-piandohana dia tsy masin-teny intsony ry zareo ary azo antoka fa ho very maina ny ezaka ataony. Ny politisiana manohana izao fitondrana izao moa dia tsy maharesy lahatra na inona na inona lazainy ary na inona na inona fanatsarana ny mpitondra.
Afaka misaina sy manavaka ny vary amin’ny tsiparifary ny olompirenena tsirairay ka izay iray alehany: na izy mbola haharim-pery ka hiandry ny fifidianana afaka fitoambinifolo volana ary handatsa-bato ho an’izay kandidà heveriny fa tena hanafaka azy amin’izao fahantrana sy fangejana azy izao, na izy tsy hanaiky intsony ka hitroatra hanohitra ny tsy rariny sy ny fampanantenana poakaty asesika ao an-dohany isan’andro vaky izao. Misy farany avokoa ny zavatra rehetra ka na iza na iza mihevitra ho manan-kery sy tanjaka dia tsy maintsy halemy ihany. Ny 25 Janoary 2014 no tonga teo amin’ny faratampon’ny heriny ny Hvm ka nanomboka teo dia nitsotsorika tsikelikely ary tonga eo amin’ny fahalemeny tanteraka amin’izao fotoana izao.